Fifidianana 2018 : Nikorontanana tanteraka -
AccueilSongandinaFifidianana 2018 : Nikorontanana tanteraka
08/11/2018 admintriatra Songandina 0
Tsindrian-daona nandritra ny fotoana ela ny vahoaka niandry na ho tanteraka ihany na tsia ny fifidianana. Tontosa soa aman-tsara izany na teo aza ny tsy fahatomombanana maro isan-karazany tsikaritra nandritra ny fanomanana, nandritra ny andron’ny fifidianana, ary indrindra fa nikasika ny ora nolazaina fa hisokafan’ny birao fandatsaham-bato. Vao maraina dia efa nisy ny olona tonga ary niforona niandalana ihany koa ny laharana. Tamin’ny 6 ora maraina no voatondro araka ny lalàna fa hivohàn’ny birao nefa nisy ireo tara minitra vitsy na ora maro noho ny antony ara-pitaovana. Ohatra tamin’izany, teny Ambohipo, Manjakaray sns ho an’ny teto an-drenivohitra. Momba ny olana ara-pitaovana izay indrindra, nisy ny tsy fahampian’ny efitrano, toy ny nitranga teny Ankadifotsy. Izany hoe, efitrano iray vata fandatsahana vato miisa 3 no tao nefa iray isaky ny efitrano no tokony izy. Marihina ihany koa fa, 700 fara-fahabetsany ny isan’ny mpifidy amin’ny birao fandatsaham-bato iray. Ny teny Ambanidia indray izao dia nisy vata fandatsahana vato saingy tsy nisy sarony. Nisy koa ireo toerana tsy nahitana bileta tokana. Niteraka olana tamin’ireo mpifidy koa ny fampiasana “marqueur” entina hanamarihana ny safidiny satria hita avy aty ambadika izany. Manoloana izay olana izay moa dia nandray ny andraikiny ny Ceni ka penina tsotra no nampiasaina mba tsy ahitana ny safidiny. Nahasorena ny mpifidy ihany koa ny tsy fahampiana fanofanana sy fampitam-baovao tao amin’ny efitrano fandatsahana vato. Efa avy any an-trano fisainana vao natoro ny fomba famalonana ny bileta tokana ny mpifidy ka hita avokoa ny safidin’ny vahoaka. Tsy fahampian’ny torimarika omena ny mpifidy hatrany dia nisy ireo nanao sonia tao ambadika ny bileta nahita ireo sonia roa efa teo. Fa teo koa ireo diso safidy noho ilay sary kely loatra. Ho an’ny tany Ampangabe dia nifandiso indray ny bileta. Fa tena lesoka goavana dia ny fahitana fa efa nisy sonia mialoha ireo bileta tokana teny Anatihazo Isotry. Nefa raha ny tokony ho izy atao hatsapaka mialoha ireo manao sonia ny bileta.
Mahakasika ny lisi-pifidianana indray dia betsaka ireo tsy tao anaty lisi-pifidianana nefa nahazo karatra. Fa misy koa ireo diso ny anarany, toy ny niseho teny amin’ny fokontany Ampitatafika fa afaka nifidy ihany. Misy kosa ireo olona izay voasoratra any amina lisitra fifidianana roa samihafa. Ao ny olona efa maty kanefa mbola nisy kara-pifidianana nivoaka tamin’ny anarany ihany, ny olona efa nifindra monina am-polotaonany nefa mbola namoahana karatra tao amin’ny fokontany. Ny iray ankohonana ka ny sasany nahazo, ary ny hafa kosa sady tsy nahazo, no tsy ao anaty lisitra. Fa betsaka ihany koa ny olona no tsy naka ny kara-pifidianany, ka nentin’ireo kaomitim-pokontany teny amin’ny birao fandatsaham-bato, sao mba….. Ny afaka nifidy indray tsy nitondra kara-panondrom-pirenena ka voatery naverina. Mbola nohamafisin’ny Ceni, omaly, tamin’ny alalan’ny filoha lefitra, Rakotonarivo Thierry, “izay ao anaty lisi-pfidianana ihany no afaka mandatsam-bato. Ireo anaty lisitra tsy misy kara-pifidianana afaka mifidy, fa tsy mahazo mifidy kosa raha tsy misy karaponondrom-pirenena, na fahazoan-dalàna mamily na pasipaoro mbola manankery mba hialana amin’ny fisandohana satria betsaka ireo efa maty sy nifindra monina anaty lisitra.” Tsiahivina fa 9 913 599 ireo voasoratra anaty lisi-pifidianana izay misandrahaka amin’ny birao fifidianana 25 000 manerana ny Nosy. Mahakasika ny lesoka nandritra ny andron’ny fifidianana izay hatrany dia, nitaraina ireo sefom-pokontany sasany tany Ambositra fa izy ireo no tsy maintsy miantoka ny fampandehanana ny jiro amin’ireo birao fandatsahana vato misy amin’ireny EPP ireny. Ho an’ny teny amin’ny Lisea Moderina Ampefiloha kosa dia nakaton’ireo tompon’andraikitra ny birao fifidianana satria nandeha nisakafo izy ireo. Fihetsika tsy tokony hitranga satria tokony hisokatra foana ireny na misy olona tonga na tsia. Tsy fantatra mantsy ny ora hahatongavan’ny mpifidy.
Ny fananganana herim-pamoretana ara-miaramila no nihazakazahan’i Andry Rajoelina voalohany indrindra rehefa nianjera ny fitondrana Marc Ravalomanana. Natsangan’ny HAT ny volana Marsa 2009 araka ny didim-panjakana n°2009/282 ny CNME (Commission Nationale Mixte d’Enquête), izay nanana ny ...Tohiny